Dzikama, maMac matsva ari paApple "nzira chirongwa" | Ndinobva mac
Dzikama, maMac matsva ari paApple's "road plan"
Takatarisana nekupera kwegore umo vashandisi veMac vasingakwanise kusuruvara kana kufara zvakanyanya. Chaizvoizvo Apple yakagadziridza akati wandei Mac mamodheru uye yakatotanga iyo nyowani MacBook Pro neTouch Bar uye Kubata ID chigunwe chemunwe gore rino, pamusoro peyakavandudzwa MacBook, asi izvi zvinoita sezvishoma kune vashandisi vane nyota yekuchinja uye zvitsva mune chigadzirwa chinoratidzika kunge chakatemerwa. kutora chigaro chekumashure kune zvakakosha zveiyo Cupertino kambani. Zviripachena tinofanira kutaura nezvazvo makore matatu atakave tisina shanduko muMac Pro renji kana ramangwana reMacBook Air neMac mini ...
Ndokusaka CEO wechiratidzo iye pachake aenda munzira yake achitsanangura uye achisimbisa kuti vane zvirongwa zveMacs uye kuti havamire kuvandudza. Mune ino kesi, kushoropodzwa kwezvigadzirwa zveApple zvinoreva kune mashoma magadziriso pamakomputa emakomputa uye nezvazvo Cook, zvave zvakajeka uye zvakananga:
Apple inoenderera mberi munzira yayo mune izvi uye ndosaka tisingafanire kunetseka nezvekuvandudzwa kweMac nyowani, ivo vachasvika zvechokwadi mukati megore rinouya iri sekutaura kwaTim Cook. Zviripachena kuti kuchave nevanhu vazhinji vasingatendi mutinhimira wekuvandudza gore rimwe nerimwe kune Mac iri nyore, asi mune ino kesi isu tinotenda kuti inguva yekuita kumwe kugadziridza kana kugadzirisa pane akati wandei makomputa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Dzikama, maMac matsva ari paApple's "road plan"
Pokémon Go yeApple Watch ichanonoka
Carrefour yatotibvumidza kubhadhara neApple Pay pane chero fekitori inogamuchira isina kutaurirana